Xiddiga Diirada U Arsenal Bernard Oo Sheegay Inuu Dalabyo Ka Helay Shakhtar, Porto Iyo Premier League.
Xiddiga Atletico Mineiro Bernard ayaa sheegay inuu dalabyo ka helay Shakhtar Donetsk iyo Porto iyo sidoo kale kooxo Premier League ka dhisan.
20 jirkaan kubadsameeyaha ah ayaa lala xiriirinayay Arsenal isbuucyadii u danbeysay, iyadoo wakiilkiisa uu sheegay inuu ciyaaryahanka bixi doono ka dib markii uu ku guuleystay koobkiisii ugu horeysay ee Copa Libertadores xalayto.
“Waan sii shaqeyn doonaa ilaa iyo inta ay madaxa kooxda go’aan ka gaarayaan mustaqbaleyga” ayuu da’ yarkaan u sheegay Sportv. “Waxaa jira dalabyo ka yimid Premier League, Shakhtar iyo Porto.”
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Ma jiraan wax aan u sheego taageerayaasha. Haddii aan awoodo waxaan sii joogi lahaa kooxda inta ka dhiman nolosheyda.
“Ma aqaano waxa igu dhici doona, laakiin hadii aan baxo waan ogahay inaan shaqadeyda qabsaday.”
Dani Alves Oo Lagu Waramayo Inuu Xiran Doono Maaliyadii Uu Ka Tagay Eric Abidal.
Sida ay sheegtay Mundo Deportivo oo ah jariirad ka soo baxday Catalan, daafaca midig ee Barcelona Dani Alves ayaa xiran doona maaliyada No 22 xilli ciyaareedka soo socda isagoo ku sharfaya ciyaaryahankii maaliyadaas ka tagay Eric Abidal.
Inkastoo Barcelona aysan xaqiijin number-ada ay ciyaartoydooda xiran doonaan, hadana jariirada ku dhow kooxda reer Catalan ayaa sheegeysa in Alves uu maaliyadiisa No.2 ku wareejiyay Martin Montoya isagoo doortay maaliyada No.22 oo uu ku xusuusanayo saaxiibkiisii hore Abidal.
Pedro ayaa iyadana ay jariiradaha leedahay waxa uu qaatay maaliyadii uu ka tagay David Villa ee No 7, halka numberkiisii 17 uu qaadan doono Alex Song.
Cristian Tello iyo Sergi Roberto ayaa iyagana wada doonayay number-ka Afellay ee 20, waxaana helay Tello halka Roberto uu xiran doono 24.
Thiago Alcantara: Barcelona Wax Ay Igu Ceshato Ma Aysan Sameynin.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Bayern Munich Thiago Alcantara ayaa Barcelona ku eedeeyya inay qiimo tirtay mudadii uu kooxda joogay.
Xiddigan ayaa bilowgii bishaan ka tagay Camp Nou, isagoo iska indhotiray Manchester United si uu dib ugula midoobo Pep Guardiola garoonka Allainz Arena.
“Waxaan doonayay inaan dareemo in la ii qiimeynayo” ayuu Thiago u sheegay Rac1.
“Waxaan doonayay inaan baxo, kooxdana ma aysan sameynin wax igu sii celin kara kooxda.
“Waa ogaayeen inaan doonayo inaan baxo, laakiin cid ka socota kooxda ilama soo xiriirin igamana dhaadhicin inaan sii joogo. Si kasta, waa wax la soo dhaafay, waxaana wanaagsan in mustaqbalka la fiiriyo.
“Munich waa koox cajiib ah, waa meel qurxoon, dadka kooxda iyo magaalada ayaa ii fududeeyay inaan saldhigto.”
Mourinho Oo Deganaansho Ka Muujiyay Saxiixa Rooney.
Tababaraha Chelsea Jose mourinho ayaa sheegay inuu deganaansho ka qabo isku dayga kooxda ay ku dooneyso inay ku soo xerogeliso Wayne Rooney, inkastoo kooxda aysan wax horumar ah ka gaarin.
Blues ayaa dalabkoodii furitaanka ee ay ku doonayeen weeraryahanka Man United si dhaqso ah loo soo diiday talaadadii hore, waxaana la filayaa in dalab kaas ka horumarsan inay la laabtaan.
Mourinho ayaa dhawaan soo jeediyay in arinta saxiixa Rooney oo waqti dheer qaadata inay isku dheelitirnaanta ka dhumineyso kooxda aad ugu dhow bilowga xilli ciyaareedka, laakiin waxa uu si maldahan u sheegay inaysan wax degdeg ah ku jirin.
“Xilligaan la joogo waxaan sameynay dalabkii aad ogeydeen; dalabkaas waxa uu ahaa mid banaanka iska yaalo oo rasmi ah, dalabkaas ka dibna ma jiraan wax kale” ayuu Mourinho u sheegay suxufiyiinta.
“Laakiin degnaansho ayaan ku jirnaa sababtoo ah waan ku faraxsanahay waxa aan heysano.”
Jose Mourinho Oo Durbaba Cadaadis U Soo Jiiday Macalinka Man City Manuel Pellegrini.
Jose Mourinho ayaa sheegtay inuu jiri doono cadaadis badan oo saarnaan doona Manchester City iyo Manuel Pellegrini marka loo fiiriyo kooxdiisa Chelsea.
Tababaraha reer Portugal ayaa sheegay in City ay lacag badan ku soo iibsatay ciyaaryahano qibrad leh xagaagan, halka Chelsea ay la soo wareegtay 22 jirka Andre Schurrle iyo 20 jirka Marco van Ginkel.
Mourinho ayaa aaminsan in kooxdiisa da’da yar ay u baahan yihiin qibrad, halka uu sheegay in cadaadiska uu saaran yahay Pellegrini si uu u cadeeyo lacagtii ay kooxda gelisay suuqa xagaagan.
Markii la weydiiyay tababaraha Blues hadii wax badan laga filanayo City marka loo fiiriyo Chelsea waxa uu ku jawaabay: “Dabcan”.
“Ciyaartoyda da’da yar ma ahan sida ugu fiican ee ay noqon karaan. Waxay u baahan yihiin waqti ay meesha ugu sareysa ku gaaraan.
“Waan aqaanaa ciyaartoyda ay soo iibsadeen. Waxaad ka hadleysaa Navas iyo Negredo, waa labo ciyaaryahan oo koob adduun iyo mid yurub qaaday.
“[Stevan] Jovetic, in ka badan labo sanadood waxa uu ahaa mid ka mid ciyaartoyda ugu fiican kubada Talyaaniga. Waxa uu shan sanno la soo qaatay Fiorentina, isagoo Serie A ka ciyaarayay. Fernandinho waa ciyaaryahan qibrad badan leh.
“Waxaan qabaa waa ciyaaryahano aan lala yaabeynin. Diyaar ayay yihiin. Haddii aad aragto da’dooda iyo qibradooda waxa ay joogaan xilliga ugu fiican ee ay imaan lahaayeen England, uma baahan la qabsi, umana baahna inay wax bartaan.
“Waa ciyaaryahano jooga meeshii ugu sareysay ee mustaqbalkooda ciyaareed, qibrad leh hadana da’ yar. Si aad iyo aad u fiican ayay wax u soo iibsadeen. Taas la yaab iguma aheyn sababtoo ah waxa ay heystaan lacag ay wax ku iibsadaan iyo aqoon. Waxa ay kooxda ku heystaan dad kubada cagta wax badan ka yaqaana.”
Papiss Cisse Oo Lagu Sawiray Goob Khamaar Taasoo Niyadjabisay Taageerayaashiisa Muslimiinta Ah.
Weeraryahanka kooxda Newcastle oo sheegay inuusan xayaysiin doonin maaliyada Newcastle ee lagu xayaysiinayo shirkad ribo ayaa haatan lagu eedeynayaa inuu booqday goob khamaarka lagu ciyaaro, sida aan ka soo xiganay BBC.
Papiss Cisse ayaa diidanaa inuu xirto maaliyada lagu xayaysiinayo shirkada ribada ku shaqeysata ee Wonga madaama uu ciyaaryahan Muslim ah yahay.
Si kastaba, waxaa haatan soo muuqatay in xiddiga reer Senegel lagu arkay goobta qamaarka lagu ciyaaro ee Aspers Casino bishii November.
Wakiilkiisa ayaa sheegay in Cisse uusan khamaariiste aheyn, laakiin nin u hadlay council-ka Muslimiinta ayaa sheegay in Cisse uu niyadjabiyay Muslimiinta kaliya inuu booqday Casino oo ah meel kaliya lagu ciyaaro khamaar.
Newcastle ayaa haatan fasax ku joogta Portugal, laakiin Cisse ayaa laga soo tagay ka dib markii uu diiday xayaysiinta shirkada ribada ku shaqeysata ee Wonga.
Afhayeen u hadlay Aspers Casino ayaa sheegay in Cisse uu marmar soo booqan jiray islamarkaana uu ahaa mid si fiican u dhaqma oo soo dhaweyn leh, laakiin waa uu diiday inuu xaqiijiyo inuu wax khamaar ah dhigtay.
Madou Diene, wakiilka ciyaaryahanka ayaa isna yiri: “Papiss Cisse ma ahan khamaariiste.”
Dipu Ahad oo ka mid ah council-ka Muslimiinta Newcastle ayaa hore u difaacay go’aanka uu Cisse ka qaatay xirashada maaliyad lagu xayaysiinayo Wonga, laakiin waxa uu haatan BBC u sheegay:
“Xaqiiqdii ceeb ayaan dareemayaa wixii uu sameeyay, kaliya aniga ma ahan waxaa jira dad kale oo badan oo taageerayay.
“Laakiin waxa uu haatan sameeyay, inaan ku arko casino, xitaa hadii uusan khamaar dhigan, waxaan qabaa in fariin qaldan ay direyso.”
Bayern Munich Oo Badisay Iyo Borussia Dortmund Oo Laga Badiyay Koobka Telekom Cup.
Bayern Munich ayaa u soo baxday finalka koobka saaxiibtinimo ee Telekom Cup ka dib markii ay si raaxo leh 4-0 kaga badiyeen kooxda Hamburg ciyaar ka dhacday Borussia-Park.
Goolasha ay Bayern ku badisay ayaa waxa ay uga mahadcelineysaa Jerome Boateng, Mario Mandzukic, Toni Kroos iyo Thomas Muller.
Kulankaan ayaa ahaa mid la ciyaaro kaliya 60 daqiiqo oo qeybtiiba ay tahay 30 daqiiqo, waxaana ay Bayern Munich maamuleysay ciyaarta inteeda badan.
Tababare Pep Guardiola ayaana ciyaartoy badan tijaabiyay iyadoo xiddigooda cusub Thiago Alcantara uu ku soo bilowday islamarkaana uu ka garab ciyaarayay Kroos kaasoo dhaawac ku maqnaa qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore.
Thiago ayaana si fiican u ciyaaray isagoo ka dhex muuqday ciyaarta ilaa iyo markii la bedelay ku dhawaad dhamaadkii ciyaarta.
Bayern Munich ayaa berrito finalka Telekom Cup la ciyaari doonta kooxda Borussia Monchengladbach oo ah martigeliyayaasha kuwaasoo 1-0 kaga soo badiyay Borussia Dortmund, goolkaasoo ahaa rigoore la dhaliyay dhamaadkii ciyaarta.
Sepp Blatter: Bundesliga Waa Horyaal Mudan Inay Ku Daydaan Horyaalada Kale Ee Yurub..
Madaxweynaha Fifa Sepp Blatter ayaa la meel dhigay Bundesliga inuu yahay horyaalka ay mudan tahay in horyaalada kale ay uga deydaan dhanka maareynta dhaqaalaha iyo soo jiidashada taageerayaasha.
Kubada Jarmalka ayaa bilaabeysa inay gurtaan miro ay abuurteen 10 sanno ka hor, iyadoo Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ay soo gaareen finalka Champions League xilli ciyaareedkii hore.
Waxaana Blatter uu sheegay inuu dareemayo in horyaalada kale ee Yurub ay tahay inay wax ka bartaan Budesliga.
“Kooxaha gabi ahaanba waa kuwa caafimaad qaba marka laga hadlayaao dhaqaalaha, waxaana ay kooxahooda heystaan ciyaaryahano waa weyn, halka ay sidoo kale guulo ka gaarayaan Europe.” ayuu Blatter u sheegay TZ.
“Guud ahaan, Budesliga waxa uu tusaale u yahay horyaalada kale. Qaabka horyaalka loo maareeyo iyo sidoo kooxaha loo koontaroolo waa wax mudan amaan.”
Blatter ayaa si gaar ah u amaanay Bayern Munich kuwaasoo xilli ciyaareedkii hore hantay seddexdii koob ee taariikhiga ah oo ay ku jirto Champions League.
“Waxa ay Bayern gaartay sannadkii hore waa wax cajiib ah” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Kaliya ma aheyn inuu guulo gaareen, laakiin waxaa intaas ka sii sareeya, farsamadooda iyo kubadooda qurxoon.
Petr Cech Oo U Sheegay Manchester City In Lacag La Qarashgareeyo Aan Lagu Qaadin Koobab.
Goolhaye Petr Cech ayaa shaaca ka qaaday in lacagta 100ka milyan ginni ee ay xagaagan qarashgareysay Manchester City inaysan waxba u sameyn doonin.
Tababaraha City Manuel Pellegrini ayaa lacag ku qarashgareeyay Fernandinho Navas, Negredo iyo Jovetic.
Laakiin goolhayaha Chelsea ayaan wax cabsi ah ka qabin saxiixyada cusub, isagoo sheegay in lacag la qarashgareeyo inay tahay wax sahlan, laakiin in koobab lagu guuleysto ay adag tahay.
Sida ay qortay The Sun Cech ayaa yiri: “Lacag marnaba waxba kuuma qaado. Waxaad qarashgareyn kartaa ilaa iyo intii aad doonto laakiin waa inaad koox dhistaa marka hore.
“Haa, City waxa ay tartan weyn ugu jiraan boos kasta.
“Waxa ay heystaan tababare cusub, hami cusub iyo dhiirogelin cusub.
“Haddii ay dhisaan koox waxa ay noqon doonaan koox adag, islamarkaana nagula tartanta Champions League iyo horyaalka Premier League. Laakiin waa si la mid ah Manchester United.
“Si la mid ah Arsenal, Tottenham iyo Liverpool.
“Waqtigii koob ugu danbeysay Arsenal aad ayay u dheer tahay, waxaana ay doonayaa inay taas iska dhaqaan.”
Napoli Oo Lagu Soo Waramayo Inay Heshiis Kala Gaartay Real Madrid Saxiixa Gonzalo Higuain.
Wargeyska Corriere dello Sport ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa sheeganaya in Napoli ay heshiis 35 milyan euro kala gaartay Real Madrid saxiixa Gonzalo Higuain.
Waxaa lagu soo waramayaa in labada kooxood ay dib u soo cusbooneysiiyeen wadahadaladii u dhaxeeyay ka dib markii ay Napoli dhibaato kala kulantay saxiixa weeraryahanka Internacional Leandro Damiao.
Sida ay qoreyso Corriere dello Sport, waxaa haatan lagu heshiiyay 35 milyan euro inkastoo ay tahay in Napoli ay haatan ka shaqeyso heshiis shaqsi ah oo ay la gaarto ciyaaryahanka iyo weli heshiis noqon kara mid dhib badan oo la xiriirta xuquuqda muuqaalka ciyaaryahanka ee dhanka xayaysiinta.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa suuqa kala iibsiga saarnaa tan iyo markii uu dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore sheegay inuu doonayo inuu ka tago Santiago Bernabeu, isagoo doonaya inuu si joogta ah u ciyaaro.
Ila aiyo haatan wadahadalo meel sarre gaaray oo Arsenal iyo Juventus ah ayaa noqday kuwa dhicisoobay, waxaana haatan ku soo laabatay doonistiisa kooxda Napoli.
Napoli ayaa heysata lacag ay qarashgareeyaan ka dib markii ay 64 milyan euro ku heleen Edinson Cavani kaasoo ay haatan raadinayaan bedelkiisa.